I-China M1013 pvc isandla amagilavu ​​asezingeni eliphakeme ama-pvc ama-10 amabhokisi okuphepha e-pvc ukuphepha kwamaGlobal nabahlinzeki | Xinyuanjiaye
Amagloves wesandla se-pvc e-M1013 ephezulu ...
Ukusetshenziswa Okuphezulu Kwekhwalithi ephezulu ...
I-Protec Dustproof Protec elahlekayo
Umkhiqizi we-EC Uyalahlwa ...
I-M1013 pvc isandla amagilavu ​​ekhwalithi ephezulu ama-pvc ama-10 amabhokisi okuphepha e-pvc
Ukuvikelwa kwebanga lezempilo eliphakeme kungabikho mpuphu futhi akunamaprotheni e-latex. Amagilavu ​​we-vinyl afanele abantu abathintekayo nokuzwela kwe-latex. Smooth, cuff beaded. Amandla amancane ashubile. Amandla we-Powder mahhala ukuze angaphazamisi ukunamathela noma ukumbozwa.
Ama-gloves we-Powder free Vinyl inikeza i-100% yokwenziwa, ilula futhi ithambile kune-vinyl ejwayelekile futhi ivikela kakhulu ama-applicationatgion amaningi. Umuzwa omuhle nokusebenza. Kuyindlela enhle yokuhlala yalabo abahlushwa i-Type I allergies.
1.Ukusebenza yi-pvc, okungeyona enobuthi, kuyiphunga futhi kuyimvelo, amagilavu ​​ngokuvamile aphephile kubo bonke abasebenzisi.
Ukuhlanzeka okulula, amagilavu ​​uyalahlwa, umane uwaphosa ngemuva kokusebenzisa.
I-3.Compact design ne-Lightweight, kulula ukuyithwala.
4.Geza izandla zakho zihlanzekile
Amathiphu wokugqoka amagilavu ​​ethu alahlwayo we-vinyl PVC:
1. Sicela usike iminwe lapho ugqoke. Ama-Fingernails amade kakhulu noma abukhali kakhulu angalimaza amagilavu ​​kalula.
2. Sicela usebenzise amaphakethe weminwe yakho ukugqoka, ukugwema ukuwa kwegilavu.
3. Sicela uguqule amagilavu ​​kusuka esihlakaleni sakho uye eminwe lapho ususa amagilavu.
Inqubo yokukhiqiza yamagilavu ​​e-latex: Amagilavu ​​e-Latex enziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokwenziwa / zemvelo ze-latex nezinye izinsiza ezinhle zinamandla amancanyana nokuqina; inqubo eyingqayizivele yokwelashwa emuva, akukho ukucasuka kwesikhumba nokungezwani komzimba; imikhiqizo inokwelashwa okukhethekile komhlaba, i-laini yangaphakathi ne-curling kulula ukuyigqoka futhi ikhululekile.
Izinzuzo zamagilavu ​​e-latex: Amagilavu ​​e-Latex asendaweni yonke zombili izandla, ezinezihlakala ezisontekile nomklamo olwa ne-skid ngaphezulu; zimelana nokugqokwa nemithi; bamelana ne-acid, i-alkali, igrisi, uwoyela kaphethiloli nezinye izithambisi ezahlukahlukene, njll; banokuphikisana okuhlukahlukene kwamakhemikhali, ukumelana okuhle kwamafutha futhi / ukuphepha / ukuvikelwa kwesandla
Ukusetshenziswa kwamagilavu ​​e-latex: Amagilavu ​​e-Latex alungele ikhaya, imboni, ubuhle, ucwaningo lwesayensi, amathuluzi okunemba, ukukhiqizwa kwezimoto, ukukhiqiza amabhethri, imboni ye-FRP, umhlangano wezindiza, imboni yezindiza, ukuhlanza imvelo nokuhlanza.
Imaski yokuvikela elahlekayo: Imaski yokuvikela elahlekayo kakhulu yakhiwa izingqimba ezi-2 ~ 3 zezindwangu ezingezona ezilukiwe. Imaski yokuzivikela elahlekayo isetshenziselwa ikakhulukazi ukungcola kanye nokuhlunga izinto zegogo.
Imaski elahlekayo yezokwelapha: Imaski yezokwelapha alahliwe yakhiwa izingqimba ezi-3, kufaka izingqimba ezimbili zezindwangu ezingezona ezilukiwe kanye nesendlalelo esisodwa sendwangu encibilikisiwe, esingakwazi ukuhlunga kahle amaconsi, amabhaktheriya, izinto zokuhlanza, njll. Kunconywa ukukhetha ngesikhathi esikhethekile, ezingathola ukuvikeleka okungcono.
Amaski wokuvikela we-KN95: Imaski ye-KN95 ngokuvamile yakhiwa ngezendlalelo ezi-4 ~ 5, kufaka phakathi indwangu engalukiwe nendwangu eyi-1 ~ 2 meltblown. Izinto zesigaxa sothuli kumele zingacasuki futhi zingadambisi esikhunjeni, futhi izinto zokuhlunga azilimazi emzimbeni womuntu; ububanzi bezinhlayiyana kufanele bube ngaphansi kwama-microns ayi-5 futhi isilinganiso sokucindezela kothuli kumele sibe sikhulu kune-95%. Phakathi kwazo, inani le-95% alilona inani eliphakathi, kodwa inani elincane, ngakho-ke inani elijwayelekile lemikhiqizo yangempela libekwa ngaphezulu kwe-99%.
FFP3 ukuhlunga kahle 99%, FFP2 95%, futhi FFP1 80% ~ 90%. Ububanzi bezinto ezinobungozi bucishe bube yi-60-400nm, imaskhi ayikwazi ukudlula izinhlayiya ezinkulu ngakho-ke ingavimba ngokuphumelelayo ukungcola okulimazayo.
Esedlule: Imaski yendebe
Olandelayo: Ama-Goggles we-Anti Saliva Ukuphepha Izibuko ze-Goggles Sula I-Goggles Ecacile Evikela Ukusetshenziswa Kwezokwelapha
AbakwaSGS baqinisekisile i-75% yotshwala obungenawo amanzi i-alcohol ...
Ama-Goggles Wokulwa Kwenkungu ka-Anti Saliva
Izinga eliphakeme eliphakeme lisebenzisa izingane ezi-3 ply Izingane & ...
zekhwalithi ephezulu yokuhlunga engasasebenzi eyakhiwe
Ukuphefumula Okungavikeleka Kwe-Dustproof